Chii chinonzi Ansible?
Nzira Inobatsira Sei?
Makomborero eAnable Certification:
Anokwanisa isiri itsva devops midziyo iyo yakasvika mushure mokunge chikwata uye chef aive atosimbiswa vatambi mumusika. Iine nzira yakasiyana yekugadzirisa iyo inojekesa yeI IT uye zvigadziriswe. Mucherechedzi wekutanga Ansible akazviumba, nechinangwa chekushandisa zvivakovheni, haufaniri kutarisirwa kudzidza chirongwa. Kuti ubatane kumaseji ari kure ari kuda kutarisirwa, zvinonzwisisika zvinoshandisa ssh ye * nix based system uye winrm (mahwindo ekuchengetedza kure) kwema windows based systems. T
Kudzidzisa Isingakwanisi inofanirwa kunge iri nyore, yakanakisa, inotaridzika uye iri nyore kudzidza. Iyo mirayiridzo / matanho / mabasa ekuitwa anoiswa mukati Yamla. Mabasa anourawa sequentially. Mune basa racho, isu tinoda kutaurira hurumende yehurongwa. Muenzaniso: pepa vim inofanira kuiswa. Iyo inofanira kuiswa sei, iyo inotarisirwa / inotungamirirwa ne modemu, hatifaniri kunyanya kunetseka nezvayo. Kana iyo purogiramu yakatogadzwa, saka zvinonzwisisika zvinongoramba zvisingateereri danho iroro. Izvi zvinodanwa seHedempotence.
YAML, Ndiyo mifananidzo yakajeka, iyo iri nyore kuverenga nokunyora zvose kuvanhu uye semichina. Iyo magetsi inotungamirira zvinonzwisisika inoitika mune chimwe chinonzi ma modules. Modules inogona kunyorwa mumutauro wega wega. Anakanganisika inokurumidza uye haadi kuti chero vamiririri aiswe panzvimbo yakananga server. Iwe unogona kushandisa kushandiswa kugadzirisa router / switches, iyo iyo inotsigirwa ne Anable (uye yakanyatsorongwa).
Kana iwe chaizvoizvo uchida kugadzira zvakadzika muAnable uye iwe unogadzira iwe tsika yako modules, chete ipapo, unofanirwa kudzidza kana kuziva purogiramu yemutauro.
Chimwe chinokosha zvinobatsira zveAnable ndechokuti yakasununguka uye yakasununguka. Zvakanyorwa muPython uye ani naani anonzwisisa python anogona kuverenga code uye kuishandura iyo kana zvichidiwa kuti zvipindire zvavanoda. Kutonga nekuzivikanwa uye kugamuchirwa nemakambani, Redhat akatenga Ansible mu 2015, uye iye zvino ari chikamu chepamutemo che Redhat chinopiwa. Usanetseka zvinonzwisisika achiri kusununguka uye kusununguka kwekugadzirisa, Redhat inowedzera kuwedzera, kugovera kodhi nekukura iyi purojekiti. Redhat inopa web based GUI platform inonzi Ansible Tower uye inobhadhara uye inodhura zvikuru mumaonero angu. Ndiyo nzira iyo Redhat ari kuita mari paAnable. Shanduro yakananga inopa Central Central, pamwe nekanaka analytics uye nhoroondo, uye CMDB / kuverenga.
Anable is good at Change Management, Automation, Providing and Orchestration. Nechimwe chinhu chekushandisa iwe unogona kutarisira sevhavha yako uyewo maitiro ako. Izvozvo zvinoreva kuti hapana chikonzero chekudzidzira chero shandiso yekushandisa yekushandiswa yakadai sa capistrano, shangu, nezvimwewo.
Ansible Certification muGurgaon